Nhanho yekutanga muBusiness Bhizinesi: Kuwana | Martech Zone
Nhanho yekutanga muBusiness Bhizinesi: Kuwana
Muvhuro, Mbudzi 26, 2012 Svondo, October 4, 2015 Marty Thompson
Nguva pfupi yadarika ndapedza kuverenga (kechipiri) bhuku hombe, Yemagariro Bhizinesi Ne Dhizaini: Shanduko Yemagariro Midhiya Strategies eKambani Yakabatana, by Dion Hinchcliffe naPeter Kim.
Mubvunzo wandinowanzonzwa ndewe "Tinotangira papi?" Mhinduro pfupi ndeyekuti iwe unofanirwa tanga pakutanga, asi matauriro atinoita mavambo ingangove iri nhanho yakakosha.
Sangano rinoenda sei kubatanidza kudyidzana munharaunda uye business business pfungwa munzvimbo dzadzo dzese dzinoshanda? Inofanira kunge iri yekuedza kwese kana pasina, kana kuti inofanira kuongororwa nehurongwa hwebhizimusi rine ruzivo? Chairo chiitiko chekutsvaga chinosanganisira kunzwisisa uye kunyora zvese izvo pezvakaitwa, zviitiko, uye chinokonzera zvine chekuita nezviitwa mukati mesangano. Semuenzaniso, ndeapi akateedzana akateerana ezviitiko anodikanwa kuti ugadzire uye uite odha yekutenga? Invoice? Chichemo chevatengi chinobva pa Twitter? Chigadzirwa chinodzoka?
Masangano mazhinji anozosvika kune bhizinesi rezvemagariro nepfungwa yekuti maitiro anofanirwa kuverengerwa zviitiko zvemagariro kumberi nepakati. Uye zvinove zvinoyedza chaizvo kuita chaiyo sketch maitiro kunze kweichi chitsva zvinodiwa munharaunda. Kana uchimanikidzwa kutsanangura zvizere maitiro ese aripo, masangano mazhinji haana izvozvi muruoko. Uye izvi zvinogona kuwedzera kune pfungwa yekukurumidzira, kusiiwa kwechikonzero.
Asi imwe, uye mumaonero angu, nzira iri nani ndeyekutanga kuziva zvizere maitiro ese aripo anoyerera, kutsamira, zviwanikwa, nezvimwe. Chimwe chikonzero chekudaro ndechekuti kusarudzika kwakawanda hakuratidzwe, uye kunowanzo sanzwisisika. Vanhu havawanzo kufunga nezve chivakwa chakakomberedza zviitiko izvi, uye vanowanzo kuve vasina simba.
Rudzi urwu rwekumberi kurovedza muviri runogona kumiririra yakawanda mari mune zviwanikwa. Kunyangwe kune rakakura bhizinesi kunyorera, senge SAP, Oracle, uye nevamwe, inogona kumiririra kekutanga nguva iyo bhizinesi maitiro uye kutsamira zvakarongedzwa chaizvo nenzira inogona kunzwisiswa nevazhinji. Asi ku kuvhura bhizinesi rezvemagariro Pasina iyi yekumberi kuyedza zvakare inoita kuti zvinyanye kuoma kuona zvinhu zvinogona uye zvinofanirwa kushandiswa mukugadzira metric inoshandiswa kuyera maitiro ekuvandudza. Uye izvi zvakakosha, kunyangwe iwe uchingofunga kushandisa (kana kuita chakakomba nezve) Twitter kana Facebook sechikamu cheyako sevhisi rebasa repertoire. Matanho emucheche.
Chimwe chikonzero chekunyatsonzwisisa maitiro aripo kuyerera uye zviitiko ndezvekuti iko kurovedza pachako kunogona kazhinji tsvaga nzvimbo dzinowanikwa kusangana kwekusiyana, hotspots kana uchida. Pfungwa yemahotpots muhurongwa zvakare inogona kuve chiratidzo chekuti pane tsime remvura, apo vanhu vanobva mumapoka akasiyana anoshanda vanosangana zvisina kurongwa (kana kunyangwe zvirinani) kuchinjana ruzivo. Kazhinji, izvi hazvitsanangurike mune iripo maitiro kuyerera.
Iyi mhando yemafuremu maforamu mazhinji ezvemagariro zviitiko nenzira yekuti inofanirwa kuita sechibatanidzo kune aripo maitiro. Izvi hazvireve kuti sangano rakarasikirwa nemucherechedzo wekubatira pamwe, mutengi centric, nezvimwewo zvinoreva kuti nzanga iri kushandiswa kubatsira gadzirisa zvakanangana nezvinetso zvebhizinesi.
Ongorora: Icho chinongedzo chekubatana pane iro bhuku!
Tags: dion hinchcliffekuwanikidzapeter kimBusiness Businessbhizinesi rezvemagariro nekugadzirazvemagariro vezvenhau zanohurongwa hwevanhu
Ndiri wezve bhizinesi rezvematongerwo enyika kuTwo Bhanana Kushambadzira. Ndichizvipa mhosva kuvabereki vangu, kurera pamoyo wangu, kana kukara kwangu nezvakaitika kare, asi vanhu vanondiudza kuti ndiri munhu chaiye, kugona kuvaka hukama nekutaurirana, ndichivhara musiyano uripo pakati peizvo zvinotarisirwa nevatengi, uye makambani makuru anofanirwa kuve (asi kazhinji hazvisi)
VIRURL: Inotsigirwa Yemukati uye Yakabhadharwa Yemunhu Kugovana
Kukosha kweKadzvanya Whitepaper
Nov 27, 2012 pa9: 49AM
Ida iyo posvo, Marty. Spot pamusoro.
Dec 4, 2012 pa 11: 11 AM
Kurumbidzwa kwepamusoro, zvirokwazvo, kunobva kuna tenzi. Huge ndatenda, Chris.
Mbudzi 29, 2012 na11: 51 PM
Yakanakisa kuongorora, yakandinongedzera chimwe chinhu chandisina kuziva
pamberi. Ini ndinofanira kukurudzira nekuda kwebasa rako rinoshamisa. Ndiri kutarisira zvakafanana zvakanakisa
shanda kubva kwauri mune ramangwana futi. Ndatenda nekugovana ruzivo urwu nesu.